Uyadunguzela uMsunduzikuphazamisa ukuba iMetro – Bayede News
USUKU lwayizolo luphele kunokushayisana ngamakhanda eziphathimandla
by Bayede-News Posted on 4 April 2019 11 April 2019
USUKU lwayizolo luphele kunokushayisana ngamakhanda eziphathimandla kanye nezisebenzi zoMkhandlu uMsunduzi. Lokhu kulandela amahlebezi abethi lo Masipala oyiNhlokodolobha yesifundazwe iKwaZulu-Natal usungaphansi kwesandla somlawuli. Lesi yisinqumo esithathwa yiSigungu Sokuphatha Sesifundazwe nesiholwa nguNdunankulu kulandela isincomo somnyango owelusa ukusebenza nokuphathwa koMasipala. Izimpawu zokufadala kwaloMasipala sezinesikhathi eside zihleli obala kusukela emuva kancane kokhetho ngo 2016.
Lo Masipala oholwa yi- African National Congress (ANC) ngaphansi kweMeya uMnu uThemba Njilo bekunemibiko yokuthi uyadunguzela. Amalungu omphakathi nezinhlangano zepolitiki bebesola lo Masipala ngokungazidlulisi izidingo emphakathini kubandakanya ukungcola kwedolobha. Muva nje kuvele izindaba zokuthi abasebenzi bophiko lwezimali bebe beke amathuluzi phansi nokuthiwa kuphazamise ukusebenza. Amanye amalungu omphakathi asole uMsunduzi ngokwehlukela ukuba nohlelo olusebenzayo lokuqoqa izikweletu. Lolu hlelo lwethulwa ngowezi-2016 kuthiwa lwabiza uMkhandlu izigigi ezingama-R90.
Olunye udaba olubangela lo Mkhandlu isigcwagcwa ukungaqoqwa kwemfucuza neshiya idolobha ‘lixathuka’. Kepha okubukeka kube yinkamba beyibuza kulo Masipala ngumbiko womcwaningimabhuku nothe loMasipalala usuwehlele ezingeni elibi kakhulu usuka kuleleo elibekezelekayo onyankenimali wezi-2017/18. Okubalulwe yilo mbiko kube ukungakwazi ukuhambisana nomthetho osemqoka, ukuphathwa budlaka kwezimali, ulawulo lwezangaphakathi olubuthaka Kanye nokubibikho kokuphatha ngokunikezelana.
Kwenzeka konke lokhu nje uMsunduzi awunayo iMeneja njengoba obekulesi sikhundla uMnu uSizwe Hadebe esamisiwe nodaba lwakhe lusesenkantolo. Kushicilelwe leli phephandaba kunguNkk uNelisiwe Ngcobo obambe njengeMeneja.
Enza isethulo ngokulandela umthetho wezezimali uMnu uHlanganani Makhanya obemele iHhovisi likaMgcinimabhuku ubeke isithombe esidumazayo ngokwenzeka kulo Mkhandlu nsukuzaphuma nxa kufika kwezezimali. Esethulweni uthe; “Izitatimende zezimali zikaMasipala zitholakale ziyinsambatheka kunezitatimende ezibhalwe ngokungeyikho sagcina singavumelananga nezibalo eziningi kanye nezindalulwa.”
Kuvele ukuthi uMsunduzi awuzange uhambisane nezidingo zomthetho futhi wehluleka ukulawula ngaphakathi.
“Abaphathi abazange basebenzise uhlelo lokuphatha amarekhodi ukugcina imiqulu ephathelene nokusebenza, izimpahla, ingenisomali nokusetshenziswa kwemali. Ukuhlelo nokulawula bekungabekiwe ngendlela yokuthi kungavimba, kuthole futhi kubhekane nengcuphe, okube nomthelela ekubikeni ngokusebenza nokuthambekela enqubeni ngokwezimali. Mayelana nalokhu abaphathi behlulekile ukuqisekisa ukuthi imibiko yokusebenza neyezimali ephelele, elindelekile nenembayo, esekelwe yafakazelwa ulwazi olwethembekile, akuzange kwenziwe.”
Odabeni lohlelo lokuqoqa izikweletu uMakhanya uthe: “Uhlelo alukhombisi ukusetshenziswa kwemali. Kulethwe ulwazi luxovekile nezitatimende ezingashayi khona, okudumaza abantu, abeza emahhovisi bafike baxabane nezisebenzi,” kusho esinye sezisebenzi esicele ukugadalulwa. “Abaphathi abazinaki izikhalo zethu.”
Ehambele eMgungundlovu muva nje, uMengameli Cyril Ramaphosa naye ushaye amakhala ngehlazo alifice emigwaqeni yalapha.
Ubehamba emazwini esililo seminyaka sabakhokhi bentela ngokungagqitshwa kwemigodi emigwaqweni, ukungalungiswa kukagesi ongakhanyi nesimo esihlasimulisayo sokhula nesikhotha emapaki, onqenqemeni lwemigwaqo nasemathumeni, amanye awo aphakathi kwemigwaqo emikhulu engenela eNhlokodolobha.
Ukwehluleka kwabaphathi ukulawula lo Masipala kugqame kakhulu ngezingqinamba zabasebenzi ezihlale obala ngokwehluleka ukukhipha izitatimende eziqondile zikagesi, amanzi namarate obekukhalwa ngokuthi ziyazinhlanhlathela nje. Obekucasula abaningi ngukuqinisa kukaMasipala isandla ekucisheleni imizi nosomabhizinisi ngaphandle kokuqikelela ukuthi izitatimende zemali ekweletwayo ziqondile yini.
Ukwehluleka kwamaphoyisa oMsunduzi ukuqinisekisa ukuthi imithetho yedolobha iyalandelwa kuholele ekuthutheni enkabeni yedolobha kwamabhizinisi amaningi abexakwe ngabahweba ngokungemthetho ngayo yonke impahla phambi kwezitolo zabo.
Okushayele isipikili sokugcina ngukubaleka kwabathengi besabela ukuphepha kwabo ngenxa yokucanasa kosikhotheni abadume ngama-para abachithwe phansi kwanoma yimuphi umpheme wedolobha, imini nobusuku.
Ezinye eziningi zalezi zingane zomgwaqo sezathola ikhaya lokulala lanomphelo ngaphesheya kwesakhiwo seSishayamthetho, emnyango weposi okuyindawo ebivame ukuhanjwahanjwa yizivakashi zakwamanye amazwe ebezisuke zithwebula izakhiwo ezinomlando omude waleli dolobha elingelinye lamadala kakhulu eNingizimu Afrika.
Ezinye izakhamuzi seziqale umkhankaso wokuhlenga idolobha laseMgungundlovu ngesizindalwebu sokuqopha izikhalo nokumemeza ukuba kungenelelwe ngokushesha.
Okucanule abaningi ngukukapakela emphakathini kwezinkinga zikaMasipala nabasebenzi lapho sekuyinsakavukela ukuthululwa kukadoti phakathi nemigwaqo osekufake engcupheni yezifo ikakhulukazi abahlala eduze kwezikhungo zokulahlwa kukadoti njengaleso esikuNew England Road. Emasontweni amabili edlule lo mgwaqo uvaleke kwangahambeka nhlobo emuva kokuba amaloli emfucuza eyithulule emgwaqweni njengengxenye yokuzwakalisa izikhalo kubaqashi.
Sikhulu isililo nangokwehluleka kwamaphoyisa omgwaqo edolobha ukulawula ukuhamba kwezokuthutha ngezikhathi eziningi zokungasebenzi kwamalambu omgwaqo asuke efile noma ngezikhathi zokuhamba kukagesi ngenxa yezigqinamba zakwa- Eskom.
UMsunduzi ubuye wazibalula ngokwehluleka ukuthatha izinyathelo ngezakhiwo eseziphenduke imihhume yabaphangi phakathi edolobheni. Abatshalizimali nabafuna ukuthenga imizi nezakhiwo sebehambela kude nalezi zindawo ngenxa yokwesabela ukucwila kwemali yabo ezindaweni ezinekusasa elifiphele. Baningi abakhe eduze kwalezi zakhiwo asebehluleke bancama ukuzithengisa ngoba kazisafunwa muntu.
Okubukeka bezonama ngesinqumo sokuba uMsunduzi ube ngaphansi komlawuli ngamalungu omkhankaso owaziwa ngokuthi yiSave Msunduzi City neyasungulwa nguMnu Anthony Waldhausen. Lo mkhankaso ugqugquzela izakhamuzi ukuba phakathi kokunye ukujijimeza lo Mkhandlu ngenhloso yokuthi uhambise izidingo kubantu njengokulawula komthetho. Ngaphandle kwalokhu lo mkhakaso ukhankasela ukuthi uMkhandlu uhlakazwe. Ezinye izakhamizi neziyingxenye yomkhakaso zithe sesikulungele ukuya enkantolo ngoba zikholwa wukuthi lo Mkhandlu unyathela amalungelo azo.
Posted in Ozul'azayithole, Uncategorized